दरिद्रता हुनबाट बच्नको लागि के गर्ने ? घरमा सुख-समृद्धि ल्याउन बिहानै यी काम गरौं – ताजा समाचार
दरिद्रता हुनबाट बच्नको लागि के गर्ने ? घरमा सुख-समृद्धि ल्याउन बिहानै यी काम गरौं
तपाई शास्त्रमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ? शास्त्रका अनुसार जीवनमा आत्मअनुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै केही नियमको उल्लेख गरिएको छ। शास्त्रमा उल्लेख भएका कुराहरुको पालना गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा यस्ता कुराको उल्लेख गरिएको छ जुन गर्नु हुँदैन। शास्त्रमा यस्ता काम गर्दा करोडपति देखि कङ्गाल पनि हुने उल्लेख छ।
यी तिथिमा भुलेर पनि नगर्नु मालिस र यौन कार्य हिन्दु पाञ्चाङ्ग अनुसार कुनै पनि महिनाको औंशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी र अष्टमी तिथिमा तेल मालिश र मांसाहार गर्नु हुँदैन ।
यी तिथिमा यौ!!न कार्य गर्नु पनि अशुभ मानिन्छ। अझ परपुरुष वा परस्त्रीसँग त भुलेर पनि संगत गर्नु हुँदैन ।
पुजाको समयमा वा विहान साँझ यौ*न सम्बन्ध वर्जित शास्त्रमा दिउसोमा पनि पुजाको समयमा वा विहान साँझ यौ!न सम्बन्ध वर्जित छ । यी समयमा यौ!न क्रिडामा लिप्त हुँदा अनेक प्रकारका रोग लाग्ने र अशुभ हुने उल्लेख छ।
वास्तु शास्त्र अनुसार हामीले दिनको सुरुवात नै राम्रो ढंगबाट गर्नुपर्छ, तब मनमा शान्ति छाउँछ । परिवारमा सुख आउँछ । भनिन्छ नि, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । हामीले बिहानीको कर्म जुन ढंगबाट सुरु गर्छौं, त्यही अनुरुप हाम्रो दैनिकी गुज्रन्छ । यसर्थ दिनको सुरुवात सही ढंगबाट गर्नुपर्छ, जसले दिनभरका लागि हामीमा उत्साह, उमंग र उर्जा जागिरहोस् । भलै यसका लागि स-सना कुराले पनि भूमिका खेल्छ । जस्तो बिहान उठ्नसाथ तपाईंले बाथरुम छिर्नुभयो, फेस हुन नपाई ट्यांकीमा पानी सकियो । नतिजा के हुन्छ, तपाईको मुड खराब । यसको राप त्यही क्षण सेलाउदैन, बरु दिनभर नै रहन्छ ।
अतः यस्ता संभावित कामबाट बिहानको सुरुवात गर्न ठिक हुँदैन, जसले मुड खराब गराउँछ । मनमा अशान्ति पैदा हुने, घरमा कलह हुने, साथीभाईसँगको सम्बन्ध खराब हुने कारणमा बिहानीको सुरुवातलाई पनि मानिन्छ । वास्तुशास्त्रले भन्छ, पारिवारिक अशान्तिको कारण भनेकै गलत तरीकाले दिनको सुरुवात गर्नु हो । वास्तु अनुसार दिनको सुरुवात सही ढंगले गर्नर्का लागि बिहान के के गर्नु हुन्छ, के कस्ता काम गर्नु हुँदैन भन्ने जानकारी राख्न जरुरी छ । यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर पनि घरमा सुख समृद्धि कायम राख्न सकिन्छ ।
घरमा तुलसी रोप्नु धार्मिक दृटिले मात्र नभई आध्यात्मिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले समेत लाभदायक मानिन्छ । यसले बाताबरण शुद्ध रहनुका साथै ज्ञान, विवेक, सुख, सम्पत्ति तथा स्वास्थ्यमा वृछि हुन्छ । भनिन्छ, जुन घरमा तुलसीको वास हुन्छ, उक्त घर सुखी हुनुका साथै स्वस्थ रहन्छ । त्यसैले पनि विहान उठ्ने वित्तिकै तुलसीलाई जल चढाउनु पर्छ । यसले घरमा सकारात्मक उर्जा प्रवाह हुनुका साथै स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ ।
घरमा विहान सबेरै दियो बाल्नाले सकारात्मक उर्जाको पवेश हुन्छ । साथै, यसले पैसा सम्बन्धि समस्या समेत हटेर जन्छ । यसबाहेक, घरकी महिलाले एक लोटो पानी घरको मुख्य द्धारमा राखेको खण्डमा घरमा लक्ष्मीको आगमन हुन्छ